Dirqalaawwanii itti aanan, yeroo ati Kasaa Gabateewwanii , akka akaakuu kasaatti filattu jiraatu.
Akaakuu kasaa isa saaguu barbaaddu filadhu. Filannoonii caancala kana irraa jiraachuuf, Akaakuu kasaa ati filattee irraatti hundaa'a. Yammuu Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwanfilatu, qareen kasaa keessaa yoo ta'e, kasiicha gulaaluu nidandeessa.
Oddeefaannoo isa ulaagaa kasaa tokko uumuuf wal- qabsiifamu qabu ifteessi.
Qabiiwwan wantaa irraa galfatoota kasaa uuma. Qabii tokko wantatti ida'uuf, wantichi filadhuutii, kana booda Saagi - Qabii fili.
Garsuu qabii, isa galfatoota kasaatiif fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Qaama qabii isa galfatoota kasaatiif fayyadamuu barbaddu filadhu. Gabateen, itti aanu, dirqalaawwan kasaa, warra barruu qabii "Fakkiibsaa 24: The Sun", isa keessatti "Fakkiibsaa 24" ofumaan dhawaatamee fi "The Sun" ammoo fayyadamaadhaan idaa'amee ture, irratti hundaahuudhaan filatamuu danda'u, tarreessa.
Dirqalawwanii sanduqa tarree Agarsiisaa keessatti
Galfata kasaa keessaa
Fakkiibsaa 24: Sanichi
Garsuu fi Lakkoofsa
Yoo "Barruu Qabii" filattee, Bufatniif addaan fageenye jalqaba qabii, galfata kasaa keessatti hinmul'atan.
Maqaawwan wantaa irraa galfatootaa kasaa uuma. Nanna'aa keessatti maqaawwan wantaa mul'isuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, bafata halqaraa keessattis akkasumas, jijjiiruu nidandeessa.